Iminyaka eyi-4 yamaGeofumadas, izifundo ze-4 ezifundwayo-ii-Geofumadas
Iminyaka eyi-4 yamaGeofumadas, izifundo ze-4 ezifundiweyo
NgoJuni, 2011 Internet kunye neBlogs, egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
1 kunyaka odlulileyo
Ndazama Promark3 kwimodi yophando kwaye wathabatha isigqibo sokuhlanganisa ii-Geofumadas kwiintanethi zentlalo.
Yoyikekayo ukukhutshwa kweHonduras, zonke zivalelwe emakhaya abo, zikhusele ezitalatweni, izibhamu kunye nomongameli wekhanda eCosta Rica phantse ngamanco emoyeni.
Ngokuqala ndenza ukuhlaziywa kweStchmaps, isihloko esibuye ndabuyela kwakhona. Isixhobo esiye sazisombulula indlela -Ayiyona nto ukufumana i-orthophoto kumxholo apho kukho iinkcukacha ezingaphezulu kwisitalato kunamaziko.
I-4 iminyaka edlulileyo
Wazalelwa ngamaGefiyumasi kunye naye ezimbini zokuqala: Ywamkela ukubulisa kunye nesilingo esingenasicatshulwa sokuhlaziya indlela umhlaba wethu we-Google Earth ushintshile ngayo.
Emva kweminyaka lokubhala 4 Ndiyavuma ukuba ndifunde lukhulu, kakhulu ngaphezu abanye baye bafunda isithuba sengqesho ezinzileyo okanye isihloko. Ndithatha phambi ukuvala enyangeni leyo, ukuba ukukhanya ayofomati ngqo kwizifundo ezifundiweyo, ezinye okwethutyana, abanye esisiseko kakhulu kodwa kunye ibonisa inqanaba yam yombulelo ukuya kwiminyaka emine yalo mgudu, apho ngelishwa ingqamana output of omnye wam ochwephesha endinqwenela kuyo.
Ukubhalwa ngumyalelo ofuna uqeqesho
Ngokungafaniyo wemihlathi yemveli kuba lowu, ukubhala kwi-Internet nkxu ngendlela inertial kwezakhono ezithile ezinokuthi ukubulala ixesha kanye wachitha iphefumlelwe. Html, CSS, CMS, seo, sem, p2p, RSS, GPL, PHP zizinto ngoonobumba esigcina kufuneka uye zidla, ukuqonda ukuba luncedo kwayo baze balisebenzise ukuba ulawulo lolwazi kufuneka uqeqesho kunye nomonde, amagama hackneyed kodwa kule ndawo kubonakale kwinqanaba leZakhiwo zikaRhulumente III kunye noDokotela uFerrera -umonde, uqeqesho, ngaphezu kokunye, kunye nangaphandle kwesinye-.
Le ndawo yedijithali ibangikhokelela ekubeni ndenze izigqibo, zama kwaye wenze iimpazamo kwizinto ezenzeke kwiiGofumadas. Akukho nto inonakalisayo kodwa ibuhlungu kwiimeko ezifana nomnikelo wokuvelisa umxholo omtsha, konke ngenxa spammer ufumene umngxuma kwaye nje kuphela xa ungayicombululi indlela yokuphela yindlela ezinikezelweyo.
Kodwa ekugqibeleni, ukubhalwa kusekuntsonkothile kunye neenzuzo ze hyperlink, ukusingathwa kunye nokufikelela kwehlabathi kumvuzo.
Abafundi basesekho, musa ukuphelelwa yithemba
Wonke umlobi unesihlandlo esithile, xa ukuphakama kwe-adrenaline kuphantsi, uvakalelo lokuba uyazi ukuba kukho umntu kwelinye icala lokufunda okanye apho imigca yawo ihambe khona. Iileta zendabuko ezafika kwindlu yokushicilela ngoku zibizwa ngokuba yimibono, i-retweet, abalandeli, i-backlinks, umnxeba okanye i-sms.
Iinyanga ezintandathu zokujongana nezonxibelelwano zentlalo ndifikile kwisigqibo sokuba i-Twitter izisa ukutyelela, ukukhawuleza njenge tweet kodwa ezininzi, i-Facebook ikhula ngokukhawuleza kodwa abafundi banamathela ngakumbi, i-Linkedin iyona nto ingcono yokufumana oonxibelelwano ootitshala
Ndimele ndivume ukuba kule nto Woopra Kuyeyona nto ibhetele ndiyifumene nayo. Iiyure ezenza ukuba ingxoxo ibonise ukuba umntu uhlala efuna ukuthetha, nokuba uzuze. Ukudibanisa kwiintanethi zentlalo yindlela efanelekileyo yokuzinqabisa ngokubhekiselele kwiimeko zabafundi. Ngokwengxenye kuba iququzelela ukusebenzisana, kwaye ngenxa yokuba ivumela ukuba siqonde amaqhekeza athile abawabelana ngayo kunye nexabiso labo lokunxibelelana kwamanani, ngaphezu kweenkcukacha ezilula zeGoogle Analytics.
Ukubhalwa kusisiphumo sokufunda ngokukhawuleza
Ukuba kukho into engatshintshi kulo myalelo, kukuthi imveliso yengqiqo isekelwe ekufundeni esetyenziswe. Kule nto, ngokuqinisekileyo kukho ezininzi iingxaki zefilosofi ebanzi, ngenxa yokuba encinci yale nto ishintshile kwisimo sayo kodwa kwiimpembelelo zayo jikelele.
Ngaphambi kokufundwa kwinqaku lephephandaba, iirekhodi zeebriographic okanye kwii-shelves zeencwadi zokuthengisa. Emva koko saphenya ngokuhlala phantsi ukuze sifunde ngokuzinzile kwaye lo msebenzi usuphelile ngesigqibo sokuthatha le ncwadi ekhaya okanye ukugawula kwiphephandaba lethu lokuqokelela. Kamva, yachithwa ngokukhawuleza, isetyenziselwa imihla ngemihla kwaye ukuba yenza imizamo yokudala yokongeza ixabiso kulolo lwazi.
Iinguqulelo zanamhlanje ziyafana, kunye nokuhluka kwevolumu. Ukujonga Flipboard ngokuhambelana kwi irobhothi kusinika ngokucacileyo oko kwenzekileyo, emva koko washiya rssSpeaker kwaye ukuba into uthe ingqalelo yethu esikuthumelela kuTwitter ngakumbi ukuba ibe isikhumbuzi sakho. Kodwa ufikelelo jikelele uthwala ingozi ukuba kukho ixesha elincinane ukugaya ulwazi kakhulu kwaye usisebenzise, ​​bekuya kuba nombuzo enoba ukufunda okanye ukuphulaphula nje ukuba kwenzeka ntoni apho.
Ngentlonelo yayo, iteknoloji eqhutywe kakuhle inamathuba amaninzi ngaphezu kobugcisa bexesha elidlulileyo. Mhlawumbi iziphumo zifumaneka kwi-specialization specification, nakwisigqibo sokungadluli umda osasaza iimbono zethu ngcamango yokungaphumeleli umkhwa wokufunda ngokukhawuleza.
Innovation namhlanje igcinwe kuluntu
namaqonga OpenSource umzekelo ocacileyo indlela ixabiso nemibutho utshintsha indlela yokwenza ushishino, ngokungafaniyo namanye amaxesha loo misebenzi yaba nenxaxheba abahlelekileyo. I gvSIG lomkhuba omnye wabo zokuziqeqesha baye bagqiba ekubeni bathathe ngendlela, kuba ngaphandle kokuba isisixhobo computer lwacwangciswa intshukumo kunye ezonakalisayo onamandla zigcinwe yaye bathungelane imingeni emitsha inshorensi sibonisa ukuba okusingqongileyo kokufika iye kuninzi ukufaka isandla kuluntu lwehlabathi.
Sithanda ukubona uLeonardo Davin kule ndawo, ukuvula imibono yoluntu ukubuza, ukuphucula nokwenza. Nangona kukho oku kuninzi esingayaziyo kwaye abayikuyiqonda, kuba kuyinto entsha; Ukuba nje namhlanje isaqhwithi elanga watshabalalisa zonke ezikwenza ukuba nokunxibelelana jikelele okanye yinyikima eso sitshabalalisa kwiindawo eziphambili fibre optic mhlawumbi besiya bathi ibinzana elifanayo:
"Ndimcaphukise uThixo kunye nobuntu ngenxa yokuba umsebenzi wam ungeyena mgangatho ndimele ndibe nawo."
Umphakathi odibeneyo ungenye yezinto ezixabisekileyo kakhulu ngeli xesha. Yintoni eyenzekayo kukuba ukubandakanyeka kwazo kuthethwa ukuba phantse yonke into eguqulelwe kwi-Beta, kungekhona ngenxa yokuba ayinanto into encinane kodwa ngenxa yokuba i-dynamics yayo iyinamandla. Yingakho yam imbono malunga nokunxibelelwano kwezentlalo (akukho konke) Itshintshile kakhulu kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngaphandle kwendlela yokusetyenziswa kwebhanali, kukuxhasa imodeli yoshishino lwehlabathi kwi-10 elandelayo ubuncinane kwimeko yezobugcisa -eninzi-.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Georeferencing ifayili ye-CAD
Post Next Ndivumelana kakhulu kunye uMlawuliOkulandelayo "